China Transparent wine spout mmiri mmiri obere akpa ida ịnweta mmiri obere akpa galọn ihe ọṅụṅụ obere akpa ụlọ ọrụ na suppliers | Kaiguan
Transparent wine spout mmiri mmiri obere akpa ida ịnweta mmiri obere akpa galọn ihe ọṅụṅụ obere akpa
Ngwọta akpa ego kwụ ọtọ
Omume kachasị ọhụrụ bụ maka mmanya n'ime akpa akpa.
Mgbe ị na-ahụ anyị mmanya obere akpa ngwugwu ị na-aghọta ozugbo na ha chọrọ ka iche si enweghị ọhụrụ nke mmanya ụlọ ọrụ.
Akpa mmanya na-enye uru dị iche iche: ha na-adị mfe ibufe ekele maka obere ihe owuwu, ha na-ewe obere oge iji mee ka ọ dị jụụ ma ọ dị mfe ịwụsa mmanya na-ekele ekele maka mgbata na-adịghị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha abụghị 100% recyclable dị ka omenala iko karama, n'ozuzu gburugburu ebe obibi mmetụta nke mmepụta nke ndị a obere akpa ka jisie ike na-ala, na-emepụta obere ihe mkpofu.
Ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ọnụ ala karịa bottled vino, a na-ekwukwa na ọ ka mma maka gburugburu ebe obibi.
Mmanya akpa abụghị echiche ọhụrụ. Mmanya akpa akpa, ga-eme ka ahụ dị gị mma n'ụzọ dị mfe na mpaghara ntụsara ahụ gị, ma ọ bụrụ na mmanya ahụ jọgburu onwe ya, ị nwere ike iji ya sie nri mgbe niile.
Akpa akpa na-ejide otu karama iko mmanya 750ml abụọ. Na-adịgide adịgide, dị mma na enyi na enyi, nke a bụ ohere zuru oke iji chịkwaa ahịa iko iko 1.5L na nkwakọ ngwaahịa mara mma, dị fechaa nke na-eme nnukwu ọnya.
Ọdịmma nke ịnwe obere akpa na spout pụtara na ị nwere ike ịwụpụ onwe gị otu iko na-echegbughị onwe gị maka imecha karama, na aka na-enye ohere maka ibubata na n'ime ngwa nju oyi. Akpa akpa mmanya ahụ na-ewe obere ohere karịa ka igbe ga-adị, ọ dịkwa mfe ịmegharị mgbe ị na-agbalị itinye otu izu ma ọ bụ abụọ nke ihe oriri n'ime friji.
Nchekwa na-adịgide adịgide
Igwe mmiri dị mma dị na obere akpa anyị na-eme ka ihe ọṅụṅụ dị ọhụrụ ma dị ụtọ ruo izu anọ ka emepechara.
Akụkụ ọkụ ọkụ
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ - jikọtara, ike na nke na-adịgide adịgide
Akara akara dị mma, enweghị mgbapu mmiri
GỊNỊ mere akpa akpa?
☑ Bọọdụ bọọlụ ika gị n'ụlọ ahịa yana na shelf.
☑ Ọ dị mfe imeghe, dị mfe iburu.
☑ Ngwa nju oyi na-adị ngwa ngwa.
☑ Ọ na-adị ọhụrụ ruo izu anọ ozugbo emepere ya.
☑ 80% belatara akara ukwu carbon n'elu karama iko.
Nke gara aga: Ngwunye gburugburu ebe obibi akpa vetikal (cheertainer) maka mmiri mmiri fatịlaịza nwere okpu ikuku
Osote: Kpatụ / eriri mmiri
Akpa Maka Liquid
Akpa nchacha nke ọma maka Liuqid
Akpa Flexi Maka Chemicals Liquid
Akpa Liquid Na Igbe
Akpa jupụtara mmiri mmiri
Akpa akara mmiri mmiri
Akpa Spout Liquid
Akpa Nchekwa Liquid
Akpa Liquid akpa
Akpa na-ejuputa mmiri mmiri
N'ogbe omenala e biri ebi 500ml brandi obere akpa pac ...
Ejiji ọhụrụ 1L 2L 3L 4L 5L aseptic dispenser ap...